भाइरल अलिफ खानको भूपू प्रेमिका मधु क्षेत्रि , खान भयकै कारण टाढियको खुलासा ( भिडियो ) – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण १८, २०७७ समय: २०:१४:३५
काठमाण्डौ / पछिल्लो समय युट्वबाट चर्चा कमाएका गायक आलिफ खानलाई मन नपराउने को होला ? उनको स्वरको बयान नगर्ने को होला ? उनको बोलीको माधुर्यतामा मोहीत नहुने को होला ? गीतसंगीतको दुनियाँमा विगत १० वर्षदेखि भविष्य खोज्दै हिंडेका आलिफको जीवनकथामा बेग्लै उत्साहा, निराशा, सफलता, असफलता र धैर्यता सबै कुराहरु अटेका छन् ।
लामो समयको पर्खाईपछि आलिफले अहिले आएर सफलताको सिंढीहरु चढ्दैछन् ।आलिफ मुसलमान समूदायका भएको हुनाले उनलाई उनको धर्मले गीत गाउन दिंदैन । तर गीत गाउने कला लिएर जन्मिएका आलिफलाई उनैको धर्म ग्रन्थ कुरानले पनि रोक्न सकेन । अन्ततः उनी गायक बनेरै छाडे । गायक बन्नलाई आलिफले धेरै कुराहरुको समना गर्नु पर्यो । उनले संघर्षको दौडान जीवनलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाए ।
दुःखको त्यो समयमा उनले आफ्ना आफन्त र साथीभाईहरुलाई पनि राम्रै चिन्ने मौका पाए । तर पनि उनले आत्माबल भने कहिल्यै घटाएनन् ।रातपछि दिन आउँछ र दुःखपछि सुख अवश्य आउँछ भन्ने विश्वास लिएर अघि बढेका आलिफको जिन्दगीमा उनले सोंचे जस्तै भएको छ । आजको दिनमा आलिफ खुशी छन् । उनले कामहरुपनि पाई रहेका छन् । उनै आलिफको बारेमा जान्न धेरैलाई मन भईरहेको बेला उनले गीतको माध्यमबाट आफ्नो जीवनको खास पलको बारेमा सबैलाई बताएका छन् ।
आलिफले अहिलेसम्म बिहे नगरेको हुनाले उनको जीवनमा कोही थियो या छ भन्ने जिज्ञासा धेरैलाई छ । त्यो जिज्ञासालाई आलिफले मेटाएका छन् ।आलिफले गायिका मधु क्षेत्रीसंगको दोहोरी गाउने क्रममा जात, धर्म र समाजको कुरा गरेका छन् । उक्त दोहोरी गीतमा आलिफले मधुलाई खान भएकै कारण छोडेर गएको पनि आरोप लगाएका छन् । तर मधुपनि के कम ? उनले जवाफमा आफुले नछोडेको तर आलिफकै बुवाले आफुहरुको सम्बन्धलाई स्वीकार नगरेको बताएकी छन् ।
धेरै नै सभ्य शैलीमा दुवै जना प्रस्तुत भएको उक्त गीतमा जातकै कारण सामाजिक बन्धनहरुको सामना, कुरान पढ्ने कुरा, मन्दिर छाडेर मस्जिदमा जाने कुरा आदिईत्यादिलाई समेटिएर मायाको प्रस्ताव राखिएको छ ।